Jeux - ewa.mg
Tsy natao ho an’ny misy tosi-dra. Mivoatra manaraka ny toetr’andro ny fialamboly eto Madagasikara. Raha mbola mahavariana ny ankamaroan’ny ankizy amin’ny faritra maro ny « Cheval de bois », dia efa miha-tonga tsikelikely eto amintsika ny karazana kilalao avy any ivelany ary ao anatin’izany ny sokajin’io kilalao mahafinaritra nefa mampatahotra. Hisokatra amin’ny fomba ofisialy manomboka ny 7 desambra ho avy izao ny toeram-pilalaovana « Milalaoo » eny amin’ny Akoor Digue. « Karazana kilalao tsy mbola fahita n’aiza n’aiza eto Madagasikara no atolotray ary saika zava-baovao eo amin’ny malagasy ny ankamaroany », araka ny fanazavan-dRasoamanana Valérie, tompon’andrikitr’ireo toerana ao amin’ny Akoor Digue. Karazan-dalao maoderina 25 no hita ao amin’ny toerana ka misy ireo ety ivelan’ny trano ahitana ireo kazarana « manèges » izay sady mahafinaritra no mampatahotra… 14 karazana kosa ireo kilalao ao an-trano ary ahitana karazany maro araka izay ankafizin’ny tsirairay, ny fitondrana fiarakoa, ny fanaovana boxe, ny moto… « Misy ireo karazana lalao no tsy maintsy hampitandremana ireo karazan’olona mety ho sarotiny, fa ny ankamaroan’ny dia azon’ny rehetra lalaovina na ny ankizy na ny lehibe », hoy ihany ny fanazavany. Anisan’ny zava-baovao entin’ny « Milalaoo » ho an’ny mpanjifa ihany koa ny fomba fidirana milalao. Amin’ny alalan’ny karatra izay misoratra amin’ny olona tsirairay no hilalaovana ireo kilalao ireo, ary fahanana isaky ny lany izany. Manomboka amin’ny 2000 Ar ka hatramin’ny 20.000 Ar ny saran’ny filalaovana amin’ireto kilalao ireto. Nandritra ny heritaona mahery no nanomanana sy ny nametrahana ireo fotodrafitr’asa ho an’ity toeram-pilalaovana ity. Nisy ny famindrana tsatoka ho an’ny fifandraisana an-tarobia. Tonga teto amintsika ny mpanam-pahaizana manokana nandrafitra ireo fitaovana ireo ary nampiofana ihany koa ireo Malagasy hitantana sy hikojakoja ireo fitaovana. « Telo mirahalahy ireo afaka mikirakira sy manamboatra ireo fitaovana ireo fa misy ireo mpiasa hafa miandraikitra ireo karazan-dalao samihafa izay fantatra amin’ny fitafiany », hoy ihany ny fanazavan-dRasoamanana Valérie. Miarantsoa L’article « Milalaoo » : Kilalao mahafinaritra sady mampatahotra est apparu en premier sur .L’article « Milalaoo » : Kilalao mahafinaritra sady mampatahotra a été récupéré chez Triatra.
Ny kilalao : Robot Trains
Ny Robot Train dia sarimiaina miendrika série vita avy any Korea Atsimo. I "4th Creative Party (AZworks) sy CJ E&M no namokatra azy. Ny Robot Train dia mipetraka any amin'ny "Le Monde des Trains". Ny mponina amin'io toerana io dia lamasinina avokoa. Ary ny sasany amin'ireo lamasinina ireo dia afaka miova ho robot. Ireo lamasinina ireo dia antsoina hoe "Robot Train". Ao amin'io sarimiaina io dia manaraka ny tantaran'ny lamasinina 5 izay manana hery manokana. I Kay, Alf, Duck, Selly ary Victor no anaran'ireo lamasinina ireo. I Kay dia manana hery hanokafana ny tonelina antsoina hoe "tunnel spatio-temporels" izay mampifandray ny kaontinantan'ny "Monde des Trains". I Kay dia lamasinina mangamanga ka manana endrika fiaramanidina. Afaka manao zavatra maro izy. Ny tanjon'i Kay dia ny hampifandray ny kaontinanta tsirairay izay misy ka fantatra. I Alf dia Robot Train menamena. Izy io dia miandraikitra ny ara-teknika rehetra ary no namana akaiky an'i Kay. I Alf ihany koa dia miandraikitra ny fiarovana ny kaontinantan'ny "Montagne des avalanches". Ny fitaovana voalohany hananany dia ny "lance grappins". I Duck dia Robot Train afaka mandeha amin'ny rano izay miloko mavomavo. Ny endrik'i Duck dia toy ny vavan'ny ganagana. Ny fitaovany ananany dia basy rano. Na dia ohatran'ny mikaviavia ary ity farany sy ny fatahorany dia indraindray izy dia tena ilaina raha sendra misy olana saro-bahana. I Selly dia Robot Train dia afaka manamboatra zavatra maro. Miloko mavokely izy ity. Izy no manamboatra an'ireo lamasinina raha sendra ka manana olana ireto farany na ihany koa maty. Izy ity dia miaraka amin'ny robot kely iray antsoina hoe Becky. Ankoatran'ny fahaizan'i Selly manamboatra dia afaka manamboatra baomba andriamby izay tena ilaina rehefa miady. I Victor dia Robot Train mavo sy mainty. Ny orony dia toy ny réacteur fiaramanidina izay miodina rehefa miresaka izy ary afaka mitsoka rivotra mahery. Lamasinina tena matanjaka i Victor ary efa ampy traikefa tsara. Izy no mpanofana lamasinina maro ary tena hajain'ireo mponina ao amin'ny "Le monde des trains". I Karl kosa dia Robot train mainty izay manana endrika lamasinina tena mandeha faran'izay haingana. Tena matanjaka izy ity ary manana fitaovana maro, ny sasany dia afaka ampiasaina rehefa miady fa ny tena fitaovany dia ny skate-bord izay antsoina hoe Delta Planche. Inona no nanosika an'i Karl hiady amin'i Kay, fialonana ve sa misy zavatra hafa ? Ny kilalao Robot Train Ankoatrany sarimiaina dia misy kilalao maro Robot Train toy ny : Parking Robot Train. Izy ity dia parking iray manana rihana maro. Ankoatr'izay dia misy lamasinina maro ao toy ny Duck, Selly ary i Alf ao anatiny ka afaka lalaovina eo amin'ilay parking ; Misy figurine an'i Kay, Alf, Duck, Selly, Viktor izay afaka ovaina ho lamasinina robot.
Kilalao biriky “Lego classic” sy ny manodidina azy
Ny "LEGO" dia karazana kilalao maro izay vokarin'i "The Lego Group" izay orinasa Danoà. Ny "Lego" dia biriky kely izay afaka ampifampidirina ka ny fitambarany dia manome endrika olona, fiara, trano, sambo, biby, na zavatra maro hafa. Afaka saratsarahana ireo biriky kely efa mitambatra ka hanamboarana endrika hafa indray. Ny orinasa "The Lego Group" dia nanomboka nanamboatra an'ireo biriky kely ireo tamin'ny taona 1932. Ankehitriny, ny LEGO ankoatran'ny kilalao biriky kely hatambatambatra dia efa misandrahaka mankany amin'ny "Jeux Video" sy ny sary mihetsika. Ny jeux video "LEGO" Ny "LEGO" ihany koa izao dia efa manana "jeux video" izay mifototra amin'ny "franchise" an'ireo kilalao "LEGO". Ireto ambany ireto dia misy ny jeux vidéo nivoaka tamin'ity taona ity sy ny hivoaka amin'ny taoana 2019 : ny "Lego Les Indestructibles" dia "jeux d'aventure" izay nivoaka tamin'ny 27 Jona 2018 ka azo lalaovina amin'ny Xbox One, PlayStation4, PC, Nitendo Switch. Ny Warner Bros, Interactive Entertainment no nanamboatra an'io "jeux" io. ny "Lego DC Super-Vilains" dia "jeux d'aventure" izay nivoaka tamin'ny 16 Oktobra 2018 ho an'ny Amerika avaratra ary ny 19 Oktobra 2018 ho an'ny firenena hafa. Azo lalaovina am'ny Xbox One, PlayStation4, PC, Nitendo Switch. Ny Warner Bros, Interactive Entertainment no nanamboatra an'io "jeux" io. ny "Lego Toy Story" kosa dia hivoaka amin'ny taona 2019. Ny sary mihetsika "LEGO" Ny "The Lego Group" dia mamokatra na mivarotra "film d'animation" sy "série d'animation" eo ambanin'ny "licence" LEGO. Ny santionan'ny sarymihetsika "LEGO" hivoaka ato ho ato dia : "La grande aventure Lego 2". Izy io dia "film d'animation en image de synthèse" izay novokarin'i Mike Mitchell sy Trisha Gum izay heritreretina fa hivoaka amin'ny taona 2019. Io sarimihetsika io dia tohin'ilay sarimihetsika "La grande aventure Lego" izay nivoaka tamin'ny taona 2014. "LEGO Marvel Super Heroes: Black Panther - Trouble in Wakanda" dia hivoaka ny taona 2018. Ny LEGO Classic Andao isika hiverina amin'izay amin'ny kilalao biriky "LEGO Classic 10702" rehefa avy niresaka ny manodidina ny tontolon'ny LEGO. Ny "LEGO Classic" dia kilalao biriky hatambatambatra ahafahana mamorona izay ao an'eritriritra. Izy io dia misy biriky kely izay manana loko 41 karazana ary manana biriky amin'ny endrika manokana. Ny LEGO Classic dia manaitaitra ny famoronana ka izay zavatra noheritreretinao dia afaka amboarina amin'io kilalao io. Ny LEGO Classic dia : misy biriky 570 ; misy biriky mahazatra sy biriky manana endrika manokana tahaka ny varavarankely, varavarana, tafo, sns...; misy boky kely mampianatra ny fanamboarana modely 9 ; misy boaty fampirimana.